Izindaba - Yiluphi uhlobo lwezibuko zepulasitiki ezingashintsha izibuko zengilazi ngaphandle kokukhubazeka uma kwenzeka ezindaweni ezinkulu?
Okokuqala kudingeka siqonde izici eziyisisekelo zalezi zinto:
1. Isibuko se-Acrylic (i-Acrylic, i-Plexiglass, i-PMMA, i-Polymethyl Methacrylate)
Inzuzo: ukwenza obala okuphezulu, ukumbozwa kwesibuko kungaba kolunye uhlangothi, umphumela omuhle wokuvikelwa kokumboza okukhanyayo, ukumelana nomthelela (i-17 x inamandla kunezibuko zengilazi) kanye ne-shatterproof, isisindo esincane, esiqinile futhi esiguquguqukayo
Ububi: i-brittle encane
2.Isibuko sepulasitiki se-PVC
Inzuzo: eshibhile; ubunzima obukhulu; kunganqunywa futhi kugotshwe kube sesimweni
Ububi: okokusebenza okuyisisekelo akubonakali, ukumbozwa kwesibuko kungaba ngaphambili kuphela, nasekugcineni okuphansi
3.Isibuko sePolystyrene (isibuko se-PS)
Inentengo ephansi. Impahla yayo eyisisekelo ibonakala ngokusobala, futhi iqhakazile ngokuqina okuncane
4.Isibuko sePolycarbonate (isibuko sePC)
Ukwenza izinto obala okulingene, ukusizakala ngokuqina okuhle (okuphindwe ka-250 kunengilazi, okunamandla angama-30 kune-acrylic), kepha kunenani eliphakeme
5. Isibuko sengilazi
Inzuzo: inqubo yokumboza evuthiwe, ikhwalithi ephezulu yokubonisa, intengo ephansi, indawo eyisicaba kakhulu, impahla enzima kakhulu, i-wear-resistin ne-anti-scratch
Ububi: ubuntekenteke obukhulu, abuphephile ngemuva kokuphulwa, ukumelana nomthelela omncane, isisindo esinzima
Ukufingqa, into engena esikhundleni ephelele, okungelula ukuthi ikhubazeke, engasindi, futhi ingesabi ukwephulwa, iyinto eyenziwe nge-acrylic. Nazi izizathu ezimbalwa zokusebenzisa isibuko se-plexiglass se-Acrylic njengezinto zokufaka esikhundleni sengilazi yamaminerali:
● Ukumelana nomthelela - i-Acrylic inokuphikisana nomthelela ophezulu kunengilazi. Uma kwenzeka kukhona umonakalo, i-acrylic ngeke iphahlazeke ibe yizicucu ezincane kepha esikhundleni salokho, izoklebhuka. Amashidi e-Acrylic angasetshenziswa njengeplastiki yokushisa okushisayo, amawindi endlu yokudlala, amawindi wokuchitha, izibuko ze-perspex
amawindi endiza njll njengenye indlela yengilazi.
● Ukudluliswa kokukhanya - Amashidi e-Acrylic adlulisa ukukhanya okungafika ku-92%, kanti ingilazi ingadlulisa ukukhanya okungu-80-90% kuphela. Njengoba esobala njengekristalu, amashidi e-acrylic adlulisa futhi akhanyise ukukhanya kangcono kunengilazi ekhethelo.
● Imvelo enobungani - i-Acrylic iyindlela ehlukile epulasitiki enendawo, enokuthuthuka okusimeme. Ngemuva kokukhiqizwa kwamashidi e-acrylic, angavuselelwa kabusha ngenqubo yokususa. Kule nqubo, amashidi e-acrylic ayachotshozwa, bese efudunyezwa ngaphambi kokuba ancibilikiswe kabusha abe yisiraphu ewuketshezi. Lapho inqubo isiqediwe, amashidi amasha angenziwa ngayo.
● Ukumelana ne-UV - Ukusebenzisa amashidi e-acrylic ngaphandle kuveza okokusebenza kumanani aphezulu emisebe ye-ultraviolet (UV). Amashidi e-Acrylic ayatholakala ngesihlungi se-UV.
● Izindleko zisebenza kahle - Uma ungumuntu othanda isabelomali, uzokujabulela ukwazi ukuthi amashidi e-acrylic ayindlela yokonga yokusebenzisa ingilazi. Ishidi le-Acrylic lingenziwa ngesigamu sezindleko zengilazi. Lawa mashidi epulasitiki anesisindo esincane futhi angahanjiswa kalula, okwenza izindleko zokuthumela ziphansi futhi.
● Kwenziwe futhi kwamiswa kalula - Amashidi e-Acrylic anezakhiwo ezinhle zokubumba. Lapho ifudunyezwa yaze yafika kuma-degree ayi-100, ingabunjwa kalula ibe yizimo eziningi kubandakanya amabhodlela, amafreyimu wezithombe namashubhu. Njengoba iphola, i-acrylic ibambelela esimweni esakhiwe.
● Esilula - I-Acrylic inesisindo esingaphansi ngama-50% kunengilazi okwenza kube lula ukuphatha. Uma kuqhathaniswa nengilazi, amashidi e-acrylic alula kakhulu ukusebenza nawo futhi angahanjiswa kalula ukusuka endaweni eyodwa kuya kwenye.
● Ingilazi efana nokwenza izinto obala - I-Acrylic inezindawo zokugcina ukucaca kwayo futhi kuthatha isikhathi eside ukubuna. Ngenxa yokuqina kwayo nokucaca kwe-optical, abakhi abaningi bakhetha ukukhetha amashidi e-acrylic ukuze awasebenzise njengamapaneli wamawindi, izindlu zokugcina izithombo, izibani zamazulu kanye namawindi angaphambili esitolo.
● Ukuphepha namandla - Kungahle kube nezizathu eziningi zokuthi ufuna amawindi wamandla aphezulu. Noma uyifuna ngenhloso yokuphepha noma ukumelana nesimo sezulu. Amashidi e-Acrylic anamandla aphindwe kayi-17 kunengilazi, okusho ukuthi kuthatha amandla amaningi kakhulu ukuqhekeza i-acrylic. Lawa mashidi enzelwe ukuhlinzeka ukuphepha, ukuphepha namandla ngasikhathi sinye okwenza ingilazi ibukeke kahle njenge-acrylic njengokufaka esikhundleni sayo
Kuyo yonke le minyaka, ukusetshenziswa kwe-acrylic sheeting kudlule ingilazi maqondana nokusebenza okuhlukahlukene nokusetshenziswa okuningi, okwenza ingilazi ye-acrylic ibe ukonga, iqine futhi isebenzise enye ingilazi.